प्रदेश २ को निर्वाचन परिणामको अर्थ | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
प्रदेश २ को निर्वाचन परिणामको अर्थ
स्थानिय तह निर्वाचनको तेस्रो चरण निर्वाचन प्रदेश नं. २ मा आश्विन २ गते सम्पन्न भइ परिणाम आइ रहेका छन् । नेपालको राजनैतिक धरातलमा यसले विविध अर्थ राख्दछ । यो विषय देश भित्र मात्र सीमित छैन । दुरगामी परिणाम अपेक्षित छन् । आजको सामयिक र सशक्त विषय हुनाले विश्लेषण गर्न आवश्यक लागेको छ ।
बैशाख देखि प्रारम्भ स्थानिय तहको निर्वाचन मधेशवादी दल खास गरी कथित रा.ज.पा. दलको अडान र बहिष्कारलाई कारण बनाइ संविधान संशोधनका विविध नाटक मञ्चन भए । प्रधानमन्त्री शेर बहादुरको दिल्लीमा संशोधन गर्ने बाचालाई राष्ट्रको बेइज्जत सम्झेर बक्तव्यबाजी गर्ने नेताजीहरुले यस भित्रको मर्मलाई बुझ्न सकेनन् । त्यो अब प्रष्ट भएको छ । मधेश केन्द्रित भन्ने केही स्वनामधन्य नेताजीहरु भारत वर्षका प्रतिनिधि लैनचौरका महामहिमबाट संरक्षित, निर्देशित थिए भनि स्वयं सिद्ध गरे । नयाँ बनेको २०७२ सालको नेपालको संविधानलाई भारतले समर्थन गरेन । केही नेताजीहरुले त्यसलाई जलाउने काम गर्दै सशक्त विरोधको परिणाम, ठूलो धनजनको क्षति, नाकाबन्दी लगायत विरोधको सामना गर्नुप¥यो । के.पी.ओलीको दृढ अडानले उत्तरी मित्र चीन संगको सम्बन्ध नजिकिएर पारवहन सम्झौताहरु समेत भए ।
भारतका लागि रणनीतिक पराजय थियो । आफ्नो भुल सुधार गर्दै नेपाल सम्बन्ध पुर्नव्याख्या गर्ने क्रममा संविधान संशोधन नभए सम्म चुनावमा भाग नलिने महतोहरु अचानक परिवर्तित गराइए । ठूलो त्रास र आशंका मानिएको २ नं. प्रदेशको निर्वाचन सर्वाधिक शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो । निर्वाचन परिणामहरुबाट अध्यात्मिक प्राणी “घुइतडीको शेड्या” को हाक जस्तै फ्रान्सका उहिलेका सम्राट लुइ चौधोले राज्य मै हुँ भनेझैं मधेश हामी हौं हाम्रो आवाज सम्पूर्ण तराईको भन्ने जन्तुहरुले एमाले धपाउ भन्ने नारा पनि लगाए । फलतः चौथो नं. को लाइनमा अवतरित भएका देखिन्छन् । कांग्रेसले स्वयंलाई १ नं. मा स्थापित गर्न सफल भयो । यसको कारक तत्वमा एमाले पनि पर्न गयो । उसैको काँधमा बन्दुक तेस्र्याएर अलगाववादीहरुलाई नाङ्गो पार्ने काम सम्पन्न गर्न सफल भएकोमा धन्यवाद दिनै पर्दछ । घात प्रतिघात गुट उपगुटमा विभाजित नरहेको भए कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त गर्नबाट रोक्न असंभव रहेछ भन्ने पनि देखाउँछ । के.पी.ओलीले राष्ट्रव्यापी नेता प्रमाणित गरे ।
एन.जि.ओ. बाहुबलीहरुको रुझान नहुदो हो त अजेय हुन सक्ने प्रष्ट देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले तराईमा समेत यसरी जनमत जुटाउन सक्ला भनी शंका व्यक्त गरिदै थियो । त्यसलाई झुठा साबित गर्दै सशक्त उपस्थिति देखाएको छ । महतो, राजकिशोरहरु उपेन्द्र यादव विरुद्ध विषवमन गर्दै सकेसम्म बेइज्जत गरी रहे । परिणाम उल्टो देखियो । बुधकार बी.बी.सी.नेपाली सेवाबाट राजेन्द्र महतोको अन्तरवार्ता लखतरान परेर निर्बल भाषामा उपेन्द्र यादवको सशक्त उपस्थिति स्वीकार्दै विविध कारण देखाइ आफ्नो पराजय स्वीकारे ।
आउँदो संघीय र प्रदेश निर्वाचन पनि सम्पन्न हुनेमा कुनै द्विविधा रहेन । सम्माननिय शेर बहादुरको ठूलो सफलता देखियो र अबको निर्वाचनमा बुद्धि पु¥याए कांग्रेसका लागि सम्मानजनक परिणाम अपेक्षित छ । उसरी ३ दल बाहेक अरुले दलको मान्यता बचाउन सक्नेमा आशंका पैदा भएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाहेक अरु अस्तित्वमा
रहनेमा शंका प्रष्ट देखिन्छ ।
पुराना पंचहरु (यद्यपि विभिन्न दलमा प्रवेश गरी) को अस्तित्व लगभग समाप्त छ । उनीहरुमा दलिय संस्कार विकसित हुन सकेन । पदवीका लागि जीउज्यान फाल्ने पशुपति, प्रकाश चन्द्र, कमलहरुका लागि दुर्दिन प्रारम्भ भए जस्तो छ । वास्तवमा समानुपातिक सिटहरु समेत औचित्यहीन हुने यथेष्ट संभावना छ ।
अब मधेश हाम्रो मात्र हो भन्ने हास्यास्पद हाक लगाउने लुप्त प्रायः हुदैछन् । त्यतिको नरसंहार गराएर निरर्थक गतिविधि गरेको पुष्टि भएपछि संभवतः उपेन्द्र यादव बाहेकहरुको अस्तित्व रहनेमा पनि शंका उत्पन्न भएको छ ।
एकाएक आफ्नो पाल्तु प्राणीहरुलाई निरीह छोडेर भारतले नेपाल नीतिमा आमुल परिवर्तन गर्ने उद्देश्य, चीन पाकिस्तान संगका सम्बन्ध, डोक्लाम, भुटान, दार्जिलिङ, काश्मीर पनि परोक्ष कारण हुन सक्तछन् । कांग्रेस माओवादी लम्पसार परे भन्ने पनि लगभग मिथ्या सिद्ध हुदैछ । यो त कुटनैतिक चातुर्य
रहेछ र मधेशी नेता भनिनेहरुलाई औकात देखाउन एमाले समेत सम्मिलित भएर बनाइएको संविधानमा षड्यन्त्रकारीहरुले इच्छा गरे बमोजिमको कुनै संशोधन हुदैन आवश्यक छैन, विघटनकारीहरुका स्वार्थ पुरा हुने छैनन् भन्ने पनि हामी सर्वसाधारणमा भरोसा पैदा गरी दिएको छ ।
एउटा उपलब्धी नै मान्नु पर्ने हुन्छ यद्यपि आउँदो निर्वाचनले कस्तो परिणाम ल्याउँछ । संघीय प्रणाली र वर्तमान संविधानका प्रावधान सफलतापूर्वक लागु हुन सक्लान् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिएको छैन । खुलेआमको भ्रष्टाचारले आर्थिक रुपमा असफल राष्ट्र हुनबाट रोक्न निकै कठिन देखिदैछ र प्रदेश, संघ र स्थानिय सरकारको बीचमा सामन्जस्य हुन त्यति सहन देखिदैन ।
यो सब भएर पनि निर्वाचन प्रति जनताको अभुतपूर्व सहभागिता वर्तमानको ठूलो सफलताका रुपमा स्वीकार गर्न कुनै द्विविधा हुन सक्तैन ।
मातृ भाषा जीवित रहनुपर्छ →